Amazon chọrọ ka ị zụta ọgwụ gị | Akụkọ akụrụngwa
José Alfocea | | Amazon, Noticias
United States bụ mba nke, maka mma ma ọ bụ nke ọjọọ, nwere akụkụ dị iche iche na nke anyị. Otu n'ime ha, na nke na-adọta uche m mgbe niile mgbe m na-ahụ ya na fim na usoro telivishọn (enwebeghị m obi ụtọ ileta ya) bụ ohere nke zụrụ ọgwụ ụfọdụ na nnukwu ụlọ ahịa, dika nke gara ila zuta mkpọ tuna. Agbanyeghị, ugbu a Amazon chọrọ ịga n'ihu n'otu ụzọ wee bụrụ ụdị ahịa ọgwụ n'ịntanetị.
N'ezie, dịka onye ahịa ahụ malitere ire akwụkwọ n'ịntanetị ma ugbu a ọ na - enye gị ohere ịmejupụta ngwa ahịa gị na ngwaahịa na nri nhicha, atụmatụ Amazon ga-aga n'ihu ịgbasa azụmahịa ahụ iji nye gị ọgwụ ndị dọkịta gị kwuru.
Amazon, ụlọ ahịa ọgwụ na-esote n'ịntanetị?
Ya mere, oge nwere ike ịbịa mgbe, kama ịgbada n'ụlọ ahịa ọgwụ, anyị nwere ike ịtụ ọgwụ ọgwụ anyị na Amazon tinyere nri, ngwaahịa teknụzụ na ngwaahịa ndị ọzọ sitere na ụdị dịgasị iche iche. Dị ka ọ na-ekwu CNBC, nnukwu e-commerce na-eche ịbanye n'ahịa ahịa ọgwụ. Eric French, onye njikwa ụlọ ahịa Amazon, kwuru na ọ mụbara ndị ọrụ maka ọrụ ahụ akpọrọ "ahụike" afọ gara aga, ka ya na "ọtụtụ mmadụ" na-agba izu.
Ọnwa ole na ole gara aga, CNBC kwuru na Amazon goro Mark Lyons nke ụlọ ọrụ mkpuchi ahụike na-enweghị uru Premier Blue Cross, mepụta njikwa ahịa ọgwụ dị n'ime. Ma ọ nwere ike ịbụ na ihe ịga nke ọma nke ọrụ a na-ekpebi ma Amazon ọ ga-aga n'ihu na atụmatụ ya.
Ma ọ bụ ezie na mkpebi ahụ nwere ike ịbịa ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya, nnyefe ụlọ n'ụlọ nwere ike ọ gaghị adị nso ebe ọ bụ na ọ chọrọ inwe ndị ọkachamara n'usoro ọgwụ. Yabụ, ụfọdụ ndị nyocha na-ekwu maka otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ tupu ụlọ ọrụ ahụ ekwupụta ọrụ ọhụụ ya, nke nwere ike ịme yana yana onye na-ekesa ọgwụ. Na nke ahụ na United States n'ihi na ụwa ndị ọzọ dị ka Spain, ndị ọkachamara na-ere ọgwụ, ị nwere ike ịnọ jụụ ma anyị, chere ọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Amazon chọrọ ka ị zụta ọgwụ gị